Ubulale ingoduso wayifihla ehlathini | News24
Ubulale ingoduso wayifihla ehlathini
Durban - Usavevezela wukwethuka umphakathi waseZihlabeni oNdini, enyakatho yeKwaZulu-Natal, emuva kokuba owesilisa wakule ndawo ebulale ingoduso yakhe maqede wayofihla isidumbu sayo ehlathini elibudebuduze nakwakhe ngoLwesine.
Isidumbu sikamufi, uNkz Nokukhanya Mahlaba, 30, ongowokuzalwa eMtubatuba, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal, kuthiwa sikhonjwe nguye umsolwa, uMnu Sibusiso Xulu, 42, emuva kokuba ehambe wayozinikela emaphoyiseni endawo.
Umakhelwane ongathandanga ukudalulwa igama, uthe bebeqala ukubona into enjengalena endaweni yabo selokhu bazalwa.
"Namanje sisathuthumela ngendlela isidumbu sikaNokukhanya esitholwe siyiyona kuleli hlathi. Ubeluhlaza umzimba wonke, kukhombisa ukuthi umsolwa ubemshayela khona ukuthi aze amkhiphe umphefumulo," kusho lo makhelwane.
Uthe namanje basazibuza bayaziphendula ukuthi ngabe yini lena eholele ekutheni uMnu Xulu enze into enjengale ngoba nakuba bake baxabana, uNkz mahlaba waze wathutha wayohlala kwenye indawo, kodwa ukungaboni ngasolinye kwabo besebekulungisile.
"Bese bevakashelana nokuvakashelana nathi sesizitshela ukuthi konke sekuhamba kahle. Sithukile uma sekwenzeka into efana nale," kuqhuba lo makhelwane.
OLUNYE UDABA: Ubulale intombi wafonela umndeni ukuba ulande isidumbu
Utshele ILANGA ukuthi uNkz Mahlaba ubeyingoduso yesibili kaMnu Xulu njengoba ibikhona enye ayilobole kudala.
Uthe ngaphambi kokuthi ayohlala kwenye indawo uNkz Mahlaba, bebehlala bobathathu emzini kaMnu Xulu (nalena enye ingoduso) futhi engekho okhombisa ukuba nenkinga. Umthombo oyiphoyisa lendawo, uthe umsolwa ufike esiteshini samaphoyisa asoNdini eyoziceba ukuthi usebulele ingoduso yakhe emuva kwengxabano emfishane.
"Amaphoyisa amyalele ukuba awakhombise lapho athukuse khona isidumbu salona wesifazane. Nangempela uwathathile wayowakhombisa ehlathini elisebangeni elilinganiselwa emakhilomitheni amathathu ukusuka kwakhe. Amaphoyisa abe esembopha emva kwalokho," kusho leli phoyisa.
Imizamo yeLANGA yokuthola umndeni kaNkz Mahlaba iphelele eboyeni okwezithukuthuku zengcanga.
Ikhansela lendawo, uMnu Zithathe Mkhize, lithe noma lingazi ukuthi yini eholele esigamekweni kodwa beliye liqaphele ukuthi umsolwa unalo udlame, ikakhulukazi uma edle amanzi amponjwana.
Lithe cishe sekwenzeke izikhathi ezintathu ukuthi abone umsolwa egijimisa abangani bakhe ngommese uma esephuzile.
"Noma ngingeke ngiphwule kakhulu ngesigameko kodwa engingakubalula ukuthi umsolwa uma esedakiwe akezwa, uyathanda ukudlala ngesikhali. Uhlale ephethe ummese okuthi uma esephuze kakhulu awukhiphe ajahe ngawo abantu. Kulaba ayaye abahubhe ngommese, akekho oseke weza kimina ezobika ngokusemthethweni, bebevame ukuba bahleke nje bambalekele uma eseqala izinto zakhe," kusho uMnu Mkhize.
Okhulumela amaphoyisi kwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala, ukuqinisekisile ukuthi umsolwa uboshiwe ngosuku akhombe ngalo isidumbu sikamufi.
Uthe uvele kafishane eNkantolo yeMantshi yaseMahlabathini ngoLwesihlanu.